Daraasadda Koofiyadda Cas waxay Heltaa Xiisaha Soo -saare ee Weelasha iyo Kubernetes oo ay ugu wacan tahay Kobcinta Xirfadeed | Laga soo bilaabo Linux
Xulka wararka oo dhan | 08/10/2021 15:25 | La cusbooneysiiyay 14/10/2021 18:18 | Noticias
Markii weelasha Linux markii ugu horreysay soo baxeen cSida fikrad dhisme oo loogu talagalay naqshadeynta iyo codsiyada baakadaha, waxay fureen adduunyo cusub oo suurtagal ah oo loogu talagalay soo -saareyaasha. Goobta kubbadda koonteenarrada ee Kubernetes ayaa si dhakhso ah u raacday, taas oo u oggolaanaysa shirkadaha inay si buuxda uga faa'iidaystaan ​​awoodda weelasha, iyagoo buuxinaya baahida loo qabo in la maareeyo bay'adaha weelka weyn.
Si aad si fiican u fahamto saameynta hadda jirta weelasha iyo Kubernetes ee soosaarayaasha, Red Hat ayaa u xilsaartay CCS Insight oo ah cilmi -baaris in ay darsaan xaaladda hadda jirta isticmaalka weelka, oo ay ku jiraan faa'iidooyinka, caqabadaha, heerka korsashada iyo kiisaska adeegsiga ee la xiriira farsamadan, shirkadaha Yurub.
Istuudiyahaan wuxuu ku salaysan yahay warcelin ka timid boqollaal xirfadlayaal IT ah kuwaas oo haysta jagooyin farsamo ama ganacsi oo ka qaybqaata hagaajinta, horumarinta, hirgelinta iyo maareynta barnaamijyada softiweerka ama adeegyada codsiyada.
Sida laga soo xigtay shirkadda falanqeeya IDC:
»Marka la gaaro 2024, 75% shirkaduhu waxay diiradda saari doonaan kartida kaabayaasha iyo hufnaanta hawlgalka oo ah mudnaanta koowaad, taasoo horseedaysa koror 5x ah oo ah heerka korsashada naqshadaha daruuriga ah ee codsiyada ganacsiga ee Ganacsiga”.
Natiijooyinka ka soo baxay daraasaddan oo uu u xil saaray Red Hat waxay u muuqdaan inay tan xaqiijinayaan, iyo jawaab -bixiyeyaashu waxay daliishadeen korsashada daruuraha (33%), kartida wax -qabad ee hawlgalka (30%), iyo wax -soo -saarka oo la hagaajiyay (29%) oo ka mid ah faa'iidooyinka ugu sarreeya isticmaalka weelasha.
Shuruudahan, nama waxaa la yaab leh in 91% dadkii la wareystay kuwaas oo si toos ah ugu lug leh horumarinta ama keenista codsiyada, iyada oo loo marayo soo saarista koodhka codsiga softiweerka ama keenista adeegyada dalabka, Ka dhig horumarinta weelka ku salaysan mudnaan sare.
Kuwaas, 30% waxay daliishadeen baahida loo qabo in la bixiyo noocyo cusub oo adeegyo codsi ah oo ka mid ah dhiirrigelinta ugu sarreysa, halka 19% ay u arkaan weelasha inay tahay hab si wanaagsan loogu taageero kooxaha ganacsiga ee ka dhex jira shirkadooda. Maaddaama weelasha si weyn loogu isticmaalo warshadaha IT -ga, farsamadan ayaa sidoo kale u taagan fursad horumarineed oo xirfadeed oo loogu talagalay soo -saareyaasha.
40% iyaga ka mid ah waxay sheegeen horumarinta xirfadda inay tahay mid ka mid ah dhiirrigelinta ugu weyn ee adeegsiga weelasha.
Marka isticmaalka koonteenarku kordho, waxaa loo baahan yahay awood lagu taageero koritaankan. Aaladaha sida Kubernetes ee abaabula, iswada, iyo maareeya weelasha ayaa kaalin muhiim ah ka qaadanaya samaynta tiknoolajiyadda jawi ganacsi.
Natiijooyinka daraasadda ayaa tan xaqiijinaya, marka la eego in 61% jawaabeyaasha ay isku raaceen inay u baahan yihiin inay adeegsadaan adeegyada orchestration Laga soo bilaabo weelasha; si kastaba ha ahaatee, 19% iyaga ka mid ah waxay tixgeliyaan in tiknoolajiyadani ay aad u adag tahay si ay u awoodaan inay fuliyaan naftooda.
Natiijo ahaan, in ka badan kala bar dadka la daraaseeyay ayaa filaya in horumarinta weelka shirkaddaada gudaheeda fuliyay adeeg bixiye dhinac saddexaad ah, ama gebi ahaanba (24%) ama isku darka isticmaalka adeeg bixiye iyo adeegsiga khayraadka gudaha (32%).
Guud ahaan, shirkadaha lagu daraaseeyay daraasaddan ayaa muujinaya heer sare oo korsashada koonteenarka, iyadoo 71% jawaabeyaasha ay tilmaamayaan inay si firfircoon u adeegsadaan farsamadan hal qaab ama mid kale, ha ahaato mid ka timid wax-soo-saar ballaaran (22%) ama ka badan. (26%), ama qayb ka ah mashaariicda tijaabada ah (23%).
Daruuraha isku -dhafan waa dhab, oo jooga shirkado heerar badan leh - kaabayaasha, qalabyada iyo codsiyada - oo u baahan adeegsiga madal furan oo dhinacyo badan leh iyo adeegyo taageero oo awood u leh inay xaddidaan saameynta kakanaanta ee wax soo saarka iyo xawaaraha.
Marka loo eego natiijooyinka daraasadda, jawaabeyaasha ayaa rumaysan in weelasha ay la yimaadaan faa'iidooyin farsamo iyo ganacsi taas oo qiil ka dhigaysa isticmaalkooda, mar haddii ay oggol yihiin qaadista codsiyada iyo samaynta hannaan fulineed oo joogto ah oo loogu talagalay hawlgallada.
524-ka qof ee lagu wareystay su’aasha, 43% ayaa sheegaya in codsiyada ugu sarreeya ee ku saleysan konteenarka ee la horumarinayo oo la geeyay shirkadaha maanta ay yihiin kuwa fududeeya is-dhexgalka isla markaana kordhiya joogtaynta nidaamyada gudaha iyo qaybaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Daraasad Red Hat ayaa daaha ka qaaday in xiisaha horumariyaasha ee weelasha iyo Kubernetes ay ugu horrayn horseedaan koboc xirfadeed
DroidCam: Sida loo isticmaalo kamaradda aaladda Android ee Linux?